के राजेश हमाललाई "महानायक" मान्न तयार छैनन ? के भुवन के.सी र शिव श्रेष्ठ? —
१२ आश्विन २०७८, मंगलवार ११:१६ admin
काठमान्डौ : एक दशक अगाडि नायक राजेश हमाल लाई नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघले दिएको “महानायक”को उपाधि अझै पनि विवादित छ ।
न त, यो विवादमा नायक हमालले आफूलाई यो उपाधि चाहिएको छैन भन्न सकेका छन्, न त केही चलचित्रकर्मी उनलाई ‘महानायक’ मान्न नै तयार छन् ।
यसपटक भने नायकद्धय भुवन केसी र शिव श्रेष्ठले नै ‘महानायक’को उपाधिमाथि प्रश्न उठाए । उसो त, भुवनले बेला–बेलामा यो बिषय उठान नगरेका होइनन् ।
भुवनलाई बारम्बार साथ दिएर यो बिबादमा तर्क पेश गर्ने चलचित्रकर्मीमा पर्छन्, निर्देशक शोभित बस्नेत । शोभितको बोली यसपटक पनि रोकिएन । तर, घुमाउरो शैलीमा यसपटक शिव श्रेष्ठले पनि ‘महानायक’ उपाधिको बिरोध गरे ।
यस बिषयमा अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भुवन केसीले भने–‘हामीले न त यो उपाधिमा दाबी गर्न खोजेको हो न त कसैको नामको अगाडि झुन्ड्याइएको यो शब्दमा आपत्ती नै जनाएको हो ।
तर, चलचित्र क्षेत्रलाई यो स्थानसम्म ल्याउनका लागि एक जना मात्र व्यक्तिको भूमिका छैन । यसका पछाडि थुप्रै हातहरु सक्रिय छन् । यसैले, एक जना व्यक्तिलाई मात्र यो उपाधि दिदा अन्य व्यक्तिहरुमाथि अन्याय हुन्छ भन्ने मेरो तर्क हो ।’
भुवनले ‘महानायक’को उपाधि केको आधारमा दिने भनेर समेत प्रश्न सोझाएका छन् । भन्छन्–‘कोही एकजना व्यक्तिले भनेको भरमा कोही महानायक हुँदैन ।
कि यसको मापदण्ड बनाएर उपाधि दिनु पर्यो । कि चलचित्र क्षेत्रका सबै व्यक्ति यसमा सहमत हुनुपर्यो । बारम्बार यो बिषयमा बिबाद हुनुको कारण पनि सबै सहमत नभएर त हो ।’
भुवनले चलचित्र क्षेत्रमा ‘महानायक’को विवादले अनावश्यक हल्ला भएको बताए । उनी भन्छन्–‘हामी सबै एक भएर बसेको यो क्षेत्रमा यो बिषयका कारणले गर्दा टुक्राउने काम भयो ।
महानायक देशका लागि उच्च योगदान दिने व्यक्तिलाई मान्नुपर्छ । चलचित्र क्षेत्रका लागि ‘महानायक’ शब्द नै सुहाउँदो छैन ।’उनले, आफूहरुले कसैको विरोध नगरेको बताउँदै भने-
‘चलचित्र क्षेत्रका लागि कसको योगदान कती छ, कसको चलचित्रले बक्स अफिसमा कस्तो व्यापार गर्छ भन्ने त भोलीको दिनमा फेरि थाहा भैहाल्छ । विभिन्न उपाधि लिने अनी हलमा दर्शक नआउने भयो भने त लिनेलाई नै लाज हुन्छ ।’
नायक राजेश हमाललाई प्राविधिक संघले दिएको ‘महानायक’ उपाधि र नायिका करिश्मा मानन्धरलाई एक संस्थाले दिएको ‘महानायिका’को उपाधि बारम्बार बिबादमा पर्ने गरेको छ ।
न त पाउनेले चाहिदैन भन्न सकेका छन्, न त सबैले स्विकार गर्न नै सकेका छन् । आखिर, कहिलेसम्म चलचित्र क्षेत्र यस्ता उपाधिको पछाडि रुमल्लिने हो ? – अनलाइन खबर बाट साभार